” ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအတွက် ဆရာဖြစ်သူ ဖာဂူဆန် ဆီကနေ အကြံညဏ်တွေ တောင်းနေတဲ့ ဆိုးရှား “ – Sport Gaber
ယူနိုက္တက္ နည္းျပ ဆိုးရွား သည္ ဆရာ ျဖစ္သူ ဖာဂူဆန္ဆီကေန ယူရိုပါလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲအတြက္ ေလာ္ရီဟိုတယ္မွာ အျကံညဏ္ေတြ ေတာင္းခဲ့တယ္လို့ သိရဘာတယ္ ။ လာမယ့္ ေမလ 26 ရက္ေန႔မွာေတာ့ ယူရိုက္ပါလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲစဥ္အျဖစ္ ဆိုးရွားရဲ့ ယူနိုက္တက္ အသင္းသည္ ဗီလာရီးရဲအသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုဘာ ပြဲစဥ္အတြက္ ပြဲထြက္ကစားသမားစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆိုးရွားတစ္ေယာက္ ေခါင္းကိုက္ေနရပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ဂိုးသမားေနရာအတြက္ စပိန္ျကယ္ပြင့္ ဂိုးသမား ဒီဂီယာကို အသုံးျပဳမလား အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ ဂိုးသမား ဟန္ဒါဆန္ကို အသုံးျပဳမလားဆိုတာ စဥ္းစားရခက္ေနပုံေပၚပါတယ္။ အဆိုပါ ဂိုးသမား (2) ေယာက္ စလုံးဟာ ပုံစံေကာင္းေတြ ျပသထားၿပီး ယူနိုက္တက္ရဲ့ ပထမဦးစားေပး ဂိုးသမားေနရာအတြက္လည္း အၿပိဳင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
စပိန္ျကယ္ပြင့္ ဂိုးသမား ဒီဂီယာ ကေတာ့ လိဂ္ပြဲေတြမွာ အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ ဂိုးသမား ဟန္ဒါဆန္ထက္ ပိုမိုပြဲထြက္ခြင့္ရထားေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဆိုးရွား သည္ အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ ဂိုးသမား ဟန္ဒါဆန္ကို ပိုမိုပြဲထုတ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ ယူနိုက္တက္အေနနဲ႔ ( 1 ) ေယာက္ေယာက္ကို ပုံမွန္ပြဲထြက္ခြင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက အျခား ( 1 ) ေယာက္ကို လက္လႊတ္ဆုံးရႉံးရဖြယ္လည္း ရွိေနပါတယ္။
“ဒါက ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲပါတယ္။ ကစားသမားတိုင္းကေတာ့ အေတြ႕အၾကဳံအတြက္ ပုံမွန္ပြဲထြက္ခြင့္ လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္နိုင္တာက ၁၁ေယာက္ထဲပါ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲ ခ်ရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိဂ္ပြဲ2ပြဲ ကစားဖို႔လည္း က်န္ေနပါေသးတယ္။” လို႔ ဆိုးလ္ရွားက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဖာဂူဆန္ က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ဟိုတယ္ခန္းကို ေရာက္လာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ့ လက္ေအာက္မွာတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ကစားခြင့္မရခဲ့လဲဆိုတာ ရွင္းျပတယ္။ အဲ့တုန္းကလည္း အသင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို လိုအပ္လာမယ္ဆိုတာ ခံစားရပါတယ္။”
“ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကစားသမားအားလုံးက အသင္းရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါပဲ။ တစ္သင္းလုံးက ကစားသမားေတြေၾကာင့္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီရလဒ္ေတြကို ရရွိခဲ့တာပါ။” ဖာဂူဆန္ကလည္း သူ႔ရဲ့ လက္ထက္မွာတုန္းက ဆိုးရွား အရန္ခုံမွာ ခ်န္လွပ္ခံရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလို ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
“ ဆိုးရွား က ေတာေတာေလး ေဖာ္ေရြပါတယ္။ အရန္ခုံမွာထိုင္ရရင္ေတာင္ သူ အျပဳံးမပ်က္ခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ရဲ့ အခ်ိန္မ်ားမ်ား က အရန္ခုံမွာ ကုန္ဆုံးခဲ့ရပါတယ္။”လို႔ ဖာဂူဆန္က BBCကို ေျပာပါတယ္။
“သူက ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာဆိုရင္လည္း သင္ၾကားသမၽွကို မွတ္စုနဲ႔ လိုက္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အရင္ကတည္းက သူဟာ နည္းျပ ( 1 ) ေယာက္ ျဖစ္ဘို့. ဆႏၵရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူနိုက္တက္လို အသင္းမ်ိဳးအတြက္ေတာ့ ရလဒ္ဟာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ရလဒ္မေကာင္းရင္ေတာ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးခံရမွာပါပဲ။”
ဆိုးရွား သည္ 2018 ခုနစ္က ယူနိုက္တက္နည္းျပအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ယူ ကိုင္တြယ္စဥ္ကတည္းက အသင္းနဲ႔အတူ ဆုဖလားေအာင္ျမင္မႈ တစ္ႀကိမ္မွ မရွိထားေသးပါဘူး။ လာမယ့္ ယူရိုဂါလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲမွာဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ့ နည္းျပဘ၀ ပထမဆုံး ဆုဖလားကို ဆြတ္ခူးသြားနိုင္မလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာပါ။
ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးရှား သည် ဆရာ ဖြစ်သူ ဖာဂူဆန်ဆီကနေ ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအတွက် လော်ရီဟိုတယ်မှာ အကြံညဏ်တွေ တောင်းခဲ့တယ်လို့ သိရဘာတယ် ။ လာမယ့် မေလ 26 ရက်နေ့မှာတော့ ယူရိုက်ပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲစဉ်အဖြစ် ဆိုးရှားရဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းသည် ဗီလာရီးရဲအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုဘာ ပွဲစဉ်အတွက် ပွဲထွက်ကစားသမားစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုးရှားတစ်ယောက် ခေါင်းကိုက်နေရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဂိုးသမားနေရာအတွက် စပိန်ကြယ်ပွင့် ဂိုးသမား ဒီဂီယာကို အသုံးပြုမလား အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် ဂိုးသမား ဟန်ဒါဆန်ကို အသုံးပြုမလားဆိုတာ စဉ်းစားရခက်နေပုံပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဂိုးသမား (2) ယောက် စလုံးဟာ ပုံစံကောင်းတွေ ပြသထားပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပထမဦးစားပေး ဂိုးသမားနေရာအတွက်လည်း အပြိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။
စပိန်ကြယ်ပွင့် ဂိုးသမား ဒီဂီယာ ကတော့ လိဂ်ပွဲတွေမှာ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် ဂိုးသမား ဟန်ဒါဆန်ထက် ပိုမိုပွဲထွက်ခွင့်ရထားပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆိုးရှား သည် အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် ဂိုးသမား ဟန်ဒါဆန်ကို ပိုမိုပွဲထုတ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ( 1 ) ယောက်ယောက်ကို ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အတွက် ရွေးချယ်လိုက်ပါက အခြား ( 1 ) ယောက်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှူံးရဖွယ်လည်း ရှိနေပါတယ်။
“ဒါက တော်တော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။ ကစားသမားတိုင်းကတော့ အတွေ့အကြုံအတွက် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့် လိုချင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်နိုင်တာက ၁၁ယောက်ထဲပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို တော်တော်ခက်ခက်ခဲ ချရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လိဂ်ပွဲ2ပွဲ ကစားဖို့လည်း ကျန်နေပါသေးတယ်။” လို့ ဆိုးလ်ရှားက ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဖာဂူဆန် က ကျွန်တော့်ရဲ့ ဟိုတယ်ခန်းကို ရောက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ လက်အောက်မှာတုန်းက ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဆီမီးဖိုင်နယ် ကစားခွင့်မရခဲ့လဲဆိုတာ ရှင်းပြတယ်။ အဲ့တုန်းကလည်း အသင်းက ကျွန်တော့်ကို လိုအပ်လာမယ်ဆိုတာ ခံစားရပါတယ်။”
“ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ကစားသမားအားလုံးက အသင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသပါပဲ။ တစ်သင်းလုံးက ကစားသမားတွေကြောင့်သာ ကျွန်တော်တို့ ဒီရလဒ်တွေကို ရရှိခဲ့တာပါ။” ဖာဂူဆန်ကလည်း သူ့ရဲ့ လက်ထက်မှာတုန်းက ဆိုးရှား အရန်ခုံမှာ ချန်လှပ်ခံရတဲ့ အကြောင်းအရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယခုလို ပြောကြားသွားပါတယ်။
“ ဆိုးရှား က တောတောလေး ဖော်ရွေပါတယ်။ အရန်ခုံမှာထိုင်ရရင်တောင် သူ အပြုံးမပျက်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အချိန်များများ က အရန်ခုံမှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။”လို့ ဖာဂူဆန်က BBCကို ပြောပါတယ်။
“သူက လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာဆိုရင်လည်း သင်ကြားသမျှကို မှတ်စုနဲ့ လိုက်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အရင်ကတည်းက သူဟာ နည်းပြ ( 1 ) ယောက် ဖြစ်ဘို့. ဆန္ဒရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်လို အသင်းမျိုးအတွက်တော့ ရလဒ်ဟာ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ရလဒ်မကောင်းရင်တော့ မေးခွန်းတွေ မေးခံရမှာပါပဲ။”
ဆိုးရှား သည် 2018 ခုနစ်က ယူနိုက်တက်နည်းပြအဖြစ် စတင်တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ်စဉ်ကတည်းက အသင်းနဲ့အတူ ဆုဖလားအောင်မြင်မှု တစ်ကြိမ်မှ မရှိထားသေးပါဘူး။ လာမယ့် ယူရိုဂါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ နည်းပြဘဝ ပထမဆုံး ဆုဖလားကို ဆွတ်ခူးသွားနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ။